မျိုးဆက်သစ်မှတ်တိုင်: အညာမြေက တာတေတို့ စကားဝိုင်း အပိုင်း(၁)
အညာမြေက တာတေတို့ စကားဝိုင်း အပိုင်း(၁)
အညာမြေက တာတေတို့စကားဝိုင်းမစမှီ တာတေတို့နေထိုင်ရာ အညာကျေးလက်ဒေသလေးရဲ့ ပြောင်းလဲမှုအနေအထားများကို ရှေးဦးစွာ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါသေးသည်။ ဟိုယခင်က ကျေးလက်အညာနှင့် ယခုနောက်ပိုင်း ကျေးလက်အနေအထားများကား ပြောင်းလဲခြင်းများစွာတို့ဖြင့် ပြောင်းလဲနေပေပြီ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ယခင်က ရေဒီယိုသံ၊ ကက်ဆက်သံ၊ လော်စပီကာသံတို့ကိုသာ ကြားရသော ကျေးလက်ဒေသလေးသည် ယခုတော့ ဂြိုလ်တုစလောင်းသံ၊ ကာရာအိုကေသံများကိုပါ ကြားနေရပေပြီ..
တစ်ချိန်က ရေနံဆီမီးခွက်ရောင် (သို့မဟုတ်) ဘတ္ထရီမီးသီးရောင်တို့ဖြင့် မှိန်တုတ်တုတ် အညာကျေးလက်ဒေသရဲ့ ညများသည်လည်း အခုတော့ လျှပ်စစ်မီးမဟုတ်သည့်တိုင် လျှပ်စစ်မီးအလား အလင်းရောင်ပေးသော အင်ဂျင်စက်မှ အချိန်နှင့်မောင်းပေးသော လျှပ်စစ်အားဖြင့် ရွာလမ်းမများနှင့် အိမ်တိုင်းစေ့နီးပါးလိုလို မီးထိန်နေသလို ညစဉ်(၇)နာရီအချိန်မှာ တီဗွီမှထုတ်လွှင့်ပြသလျှက်ရှိသည့် ကိုးရီယားဇာတ်ကားများကိုလည်း မလွတ်တမ်း အားပေးကြည့်ရှုနေကြသည်မှာ ကလေးအစလူကြီးအဆုံးဟုပင် ပြောချင်ပါသည်။
နဂိုက တယ်လီဖုန်းဆိုလို့ ဗီဒီယိုဇာတ်လမ်းတွေထဲမှာသာ မြင်ဘူးတွေ့ဘူးသော်လည်း အခုတော့ ကော့လက်များထောင်ကာ ကမ်းရိုးတန်းဖုန်းများဖြင့် ကျေးရွာမှသည် နိုင်ငံတကာဆီသို့ စကားပြောလို့ရနေပြီဖြစ်သဖြင့် ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းခေတ် (Globalization)အဖြစ် ကူးပြောင်းလာခဲ့ချေပြီမဟုတ်လား…။ ယခင်က နွားလှည်းခလောက်သံ၊ စက်ဘီးသံများကိုသာ ကြားနေရသော ဒေသလေးသည် ယခုတော့ ကားဟွန်းတီးသံ၊ ဆိုင်ကယ်ဟွန်တီးသံတို့ဖြင့် ဖုံးလွှမ်းနေပေပြီ။ ယခင်က လက်ဖျော်ကော်ဖီကိုသာ အားထားသောက်သုံးနေသော ဒေသလေးသည် ယခုတော့ စူပါကော်ဖီမစ်၊ ဟိုက်တီးစသော ရယ်ဒီမိတ်များကိုပါ သောက်သုံးနေပေပြီမဟုတ်လား၊
နောက်ထပ်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကား အရွယ်ရောက်စ လူပျိုပေါက်လေးများရဲ့ ဆံကေသာများက ထိုးထိုးထောင်ထောင် ဖြစ်နေကြ၏။ ထင်သာမြင်သာအောင် ပြောရလျှင် ဇရက်ဦးခေါင်းနှင့်ပင် တူနေပေပြီ။ ဒီကြားထဲ တစ်ချို့ကား ဆေးဆိုးထားသဖြင့် မြေဘုတ်ဘီလူးများနှင့် လားလားတူနေသည်မှာ ယခင်က ကျေးလက်အနေအထားနှင့် ဘာမျှမတူတော့... ဤသို့သော ပြောင်းလဲခြင်းများနှင့် ပြောင်းလဲနေသော အညာကျေးလက်ဒေသမှ တာတေတို့စကားဝိုင်းကလည်း ဘယ်သို့ဘယ်ပုံ ပြောင်းလဲနေမည်ဆိုတာကိုတော့ အောက်ပါသူတို့ရဲ့ စကားများက သက်သေထူသွားပါလိမ့်မည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျေးလက်ဒေသကလူတွေရဲ့ ရိုးသားပွင့်လင်းမှုများကတော့ ယခုထိတိုင် မပြောင်းလဲသေးပါဟု ပြောကြားရင်း စကားဝိုင်းအပိုင်း(၁)ကို တင်ပြပေးသွားပါတော့မည်...
ယနေ့ညနေပိုင်း စောစောစီးစီးအချိန်မှာ ကိုတာတေတစ်ယောက် ရေးကြီးသုတ်ပြာနှင့် ကျွန်တော်တို့အိမ်သို့ ပေါက်ချလာသဖြင့်
“ဟာ တာတေကြီးပါလားဗျ..စောစောစီးစီး ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ? ထမင်းကော စားခဲ့ပီးပီလားဗျ..”
“အေးဗျာ.ဒီနေ့တော့ စောစောစီးစီးခင်ဗျားတို့အိမ်ပြေးလာတာ.”ဟု ပြန်ဖြေသဖြင့် ကျွန်တော်က “ဘာလဲ အိမ်ကမောင်းချလိုက်ပြီလား”ဟု စကားစလိုက်တော့ သူက ဤသို့ပြန်ပြောလေတော့၏။
“မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ..ဒီလိုဗျ ဒီနှစ့် ရွာသင်္ကြန်ကပွဲအမှီ မလေးရှားအလုပ်သွားလုပ်နေတဲ့ မြင့်မောင်တို့အုပ်စုနဲ့ ဖားကန့်မှော်ထဲ အလုပ်သွားလုပ်နေတဲ့ ကျော်လေးတို့အုပ်စုရော ပြန်လာကြမယ်လို့ ငါထမင်းစာနေတုန်း ရွာတောင်ပိုင်းက ကိုဇော်ကြီးဖုန်းမှာဆက်လာလို့ အဲဒါ ၀မ်းသာအားရဖြစ်ပြီး ခင်းဗျားတို့ကို လာပြောတာဗျ. အခုအိမ်က စားလက်စထမင်းပန်ကန်ပြားတောင် ပစ်ထားခဲ့တာလေ..”
တာတေစကားအဆုံးမှာတော့ လောလောလတ်လတ် ရောက်ရှိလာတဲ့ တာတေနဲ့ စကားပြောဖော်ပြောဖက် ညီပုကရောက်ရောက်ချင်းပဲ မဆိုင်းမတွပင်..“အေးဗျာ ကိုတာတေပြောသလို ဒီနှစ်သင်္ကြန်အမှီ သူတို့တွေပြန်လာကြမယ်ဆိုတော့ ကျုပ်လဲ တအားဝမ်းသာလိုက်တာဗျာ. အော်ဒါနဲ့ ကိုတာတေ ကျုပ်တို့ရဲ့စကားပြောဖော်ကြီး သာညိုတစ်ယောက်လည်း ဒီညရောက်မလာသေးပါလား၊ မလေးရှားက မြင့်မောင်တို့ ပြန်လာမယ်ဆိုတာကို သူသိရင်လဲသိပ်ကို ၀မ်းသာမှာ သေချာတယ်နော်..”
ညီပုစကားအဆုံးမှာတော့ ကိုတာတေက “..မင်းတို့ကို ဒီထက်ပိုပြီး ၀မ်းသာစရာပြောရမယ်ဆိုရင် မလေးရှားက မြင့်မောင်တို့အုပ်စုက ရွာသင်္ကြန်ကပွဲမဏ္ဍပ်မှာ စတုဒိသာအကျွေးမွေးအတွက် တာဝန်ယူကြမယ်တဲ့လေ..”
“ပြီးတော့ ဖားကန့်မှော်ထဲက ကျော်လေးတို့အုပ်စုကတော့ ဒို့ရွာထဲက သက်ကြီးရွယ်အို အဘိုးအဘွားတွေအတွက် သက်ကြီးပူဇော်ပွဲအတွက် အမာခံမတည်ငွေ ထည့်ဝင်လှူဒါန်းကြမယ်တဲ့ဗျ. ဘယ်လောက် ၀မ်းသာစရာကောင်းလိုက်လဲ..”
ဤသိုဖြင့် ညနေစောစောစီးစီးမှ စတင်လာခဲ့သော တာတေတို့စကားဝိုင်းကလည်း တောထဲမှပြန်လာကြကာ ရေချိုးထမင်းစားပြီး အိမ်မှထွက်လာကြသော လူငယ်တစ်သိုက်လဲ ရောက်လာကြသဖြင့် ပို၍ပင် အသက်ဝင်ကာ တစ်အိမ်လုံးဆူညံနေတော့၏၊ နောက်မှ ရောက်ရှိလာသော လူငယ်အုပ်စုထဲမှ ဇော်ကြီးက “--ကိုတာတေ ဒါဆိုဒီနှစ်သင်္ကြန်ကပွဲကို ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလိုတော့ ပြဿနာအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဗျား၊ ပျော်ရတာမှ တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ရယ်.. ဟိုအနောက်ရွာကကောင်တွေက လာနှောင့်ယှက်တော့ ကတဲ့ခလေးတွေလည်း ကောင်းကောင်းမကရဘူး.. သူတို့အတွက် ကိုယ်ချင်းစာမိတယ်လေ... ဘာလို့လဲဆိုတော့ ခလေးတွေလည်း ဒီသကြန်ကဖို့ သင်္ကြန်မတိုင်ခင် နှစ်ပတ်လောက်လိုကတည်းက မြေပြင်ပေါ်မှာ ဖုန်တငွေ့ငွေ့နဲ့ အကတိုက်ခဲ့
ကြတရတာ”ဟု ပြောပြနေစဉ်မှာပင် လူငယ်တစ်ယောက်က “...ဒီတော့ မင်းတို့ငါတို့တွေက သင်္ကြန်ကပွဲ လုံခြုံရေးအတွက် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ.. ခက်တာက ကျုပ်တို့လူငယ်တွေချည်း ပွဲလုံခြုံရေးတာဝန်ယူရတာ သိပ်အဆင်မပြေဘူး.. ပွဲဖျက်တဲ့လူကလည်း မူးရူးသောက်စားပြီးမှ လာဖျက်တော့ လူလူချင်းပွဲအုပ်ရတာ အခုခေတ်က အဆင်မပြေတော့ဘူးလေဗျာ.. ဒီတော့ ကပွဲလုံခြုံရေးအတွက် ဒို့ရွာကနေ မြို့သွားပြီး စာသွားသင်နေတဲ့ ရဟန်းသံဃာတော်တွေကို တာဝန်ပေးရရင် ကောင်းမလားလို့ စိတ်ကူမိတယ်ဗျ.. ဘယ်လိုလဲ ကိုတာတေကြီးရ..”
“အေးကွာ မင်းတို့ပေးတဲ့အကြံလည်း မဆိုးပါဘူး.. ကောင်းပါတယ်.. ဒါပေမယ့် ခက်တာက
အမာခံပွဲအုပ်ဦးဇင်းလေးက ဒီနှစ် မြို့ကနေ ပြန်လာပါ့မလားဟ. သူက နှစ်တိုင်းရွာသင်္ကြင်္န်ကပွဲအတွက်
တော်တော်ကြီးကို အားကိုးရတယ်ဗျ.. ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပဲ ကြည့်လေ.. အဲဒီကိုယ်တော်လေး
သတ္တိဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုတာ ဒို့တတွေ အသိဆုံးဘဲမဟုတ်လား.. ဟိုရွာကကောင်တွေ
ထွက်ပြေးကြလိုက်ပုံများ သူတို့စီးလာတဲ့ ဆိုင်ကယ်ကိုတောင် ရွာအထွက်မှာ ပစ်ထားခဲ့ရတဲ့အထိဘဲလေ”ဟု တာတေက ပြီးခဲ့တဲ့သင်္ကြန်အဖြစ်ပျက်များကို စီကာပတ်ကုံး လူငယ်များကို ပြောပြနေလေတော့၏။
ဤသို့ဖြင့် ကိုတာတေနှင့် ရပ်ရွာ့လူငယ်လေးများရဲ့ စကားဝိုင်းကား ရွာဦးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှ အင်ဂျင်မီးစက်ကြီးက ပိတ်ဖို့ရန် အချက်ပြတော့မှပဲ ငှဲ့ထားသော်လည်း စကားကောင်းနေသဖြင့် သောက်ဖို့ရန် မေ့နေကြသော ရေနွေးခွက်များကို ကပျာကယာ သောက်ကြကာ အသီးသီးအ်ိမ်သို့ ပြန်သွားကြတော့မှဘဲ တာတေတို့စကားဝိုင်းကလည်း မပြီးချင်ပြီးချင်နဲ့ ဒီတစ်ညတာအတွက် အဆုံးသတ်လိုက်ရလေတော့၏၊။
ပို့စ်တင်သူ- ဆန်းသစ်အောင် ===အချိန် 2/12/2010